Football Khabar » रियल मड्रिडद्वारा हाजार्ड सार्वजनिक, जर्सी नम्बर कति ?
रियल मड्रिडद्वारा हाजार्ड सार्वजनिक, जर्सी नम्बर कति ?
एजेन्सी, जेठ ३१
स्पेनिस रियल मड्रिडले आफ्ना अनुबन्धित नयाँ स्टार खेलाडी इडेन हाजार्डलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली समयअनुसार गत राति रियलले घरेलु रंगशाला सान्टियागो बर्नोबउमा बेल्जियन खेलाडीलाई सेतो जर्सीमा सार्वजनिक गरेको हो ।
रियलले हाजार्डलाई यसै साता इंग्लिस क्लब चेल्सीबाट १०० मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको थियो । हाजार्ड कठिन अवस्थामा रियलको महत्त्वकांक्षी योजनामा स्पेन उत्रिएका हुन् ।
रियलले २८ वर्षीय हाजार्डलाई टोलीमा प्रमुख खेलाडीको भूमिका दिने अनुमान गरिएको छ । उनलाई धेरैले पूर्वखेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको स्थान लिने खेलाडीका रूपमा पनि हेरेका छन् ।
हाजार्डलाई सार्वजनिक गर्नुअघि उनको मेडिकल जाँच भएको थियो । त्यसपछि घरेलु दर्शकमाझ सार्वजनिक भएर आफ्नो प्रस्तुति दिएपछि क्लबका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजसँग दोहोरो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि हाजार्ड क्लबको प्रेस रुममा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।
हाजार्डलाई सार्वजनिक गर्दा उनलाई जर्सी नम्बर पनि दिइएन । यसअघि उनलाई रोनाल्डोले लगाएको ७ नम्बर जर्सी दिने तयारी गरेको चर्चा भए पनि उनलाई केही समयपछि मात्रै जर्सी दिइने भएको छ ।
प्रकाशित मिति ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०२:२७